Sida Loo Sameeyo Saaxiibada Dadkana Saamayn Ugu Yeesho: Tilmaamaha Iyo Xeeladaha Ugu Fiican | Ragga Stylish
Sida loo yeesho saaxiibo dadka saameynna loogu yeesho
Waxaa jira dad badan oo ay ku adagtahay inay saaxiibo yeeshaan sidoo kale maxaa yeelay waxay shaqeeyaan saacado badan, waxay dayaceen saaxiibtinimada, waxay naftooda u huraan oo keliya lammaanahooda ama ahmiyad weyn siinin iyaga inta ay nool yihiin. Inaad awood u yeelatid inaad saameyn ku yeelatid dadka kale oo aad ku guuleysato saaxiibtinimada waa wax dad badani raadinayaan. Sidaa darteed, halkan waxaan ku baran doonaa xoogaa tilmaamo iyo tabaha ah inaad barato sida loo yeesho saaxiibo dadka saameynna loogu yeesho.
Haddii aad rabto inaad barato sida loo saaxiibo oo loo saameeyo dadka, kani waa qoraalkaaga.
1 Ahmiyada saaxiibtinimada
2 Farsamooyin ku saabsan sida loo yeesho saaxiibo oo saameyn loogu yeesho dadka
3 5 talaabo oo lagu baranayo sida saaxiib loo yeesho loona saameeyo dadka
3.1 U dhowaanshaha qofka
3.2 Muuji nuglaantayada
3.3 Wax wadaag ah
3.4 Weydii dareenka
3.5 Sida loo saaxiibo loona saameeyo dadka: ka bax xuubka
Xikmad-yahannadii hore iyo saynisyahannadii maanta waxay isku raacsan yihiin in furaha farxaddu uu yahay xiriirka aan la leenahay dadka kale. Macno malahan haddii aad tahay xirfadle sharaf leh, waxaad kasbataa lacag badan waxaadna xaq u leedahay inaad si xor ah u safarto, haddii aad rabto inaad tagto ama aad wax ku darsato samafalka aadanaha, macno malahan. Haddii aanad dareemin jacayl iyo qadarin, weligaa farxad run ah ma heli doontid.
La wadaagida nolosha asxaabta ayaa muhiim u ah in aad ku noolaato qaab wanaagsan in wax kasta oo kale ay u muuqdaan kuwo sare. Si kastaba ha noqotee, Celcelis ahaan 7-dii sanaba mar, waxaan lumineynaa kalabar saaxiibbadeen. Haddii aynaan qaadin wax talaabo ah oo aan ku kabi karno khasaarahan, maalin maalmaha ka mid ah ayaan toosnaa si aan u ogaanno inaanan lahayn saaxiibo dhab ah.
Laakiin sameynta saaxiibo way adagtahay. Ugu horreyntii, maxaa yeelay dad badan ayaa aaminsan in saaxiibtinimada ay tahay inay "u timaaddo" dabiici ahaan, tan ka soo horjeedana maahan inay dhab noqoto Laakiin sababta ugu weyn ayaa ah sii wadis la’aanta. Aad u fudud. Xiriirka joogtada ah waa tiirarka saaxiibtinimada. Ma xasuusataa markii aad caruurta ahayd? Waxaad la kulmi jirtay asxaabti fasalka maalin kasta, laakiin hadda waxaad haysataa shaqo ama qoys, waa wax aan macquul ahayn. Marka, haddii aad xiriir ka sameyn karto meel ka baxsan xiriirradaada xirfadeed, goobtaada shaqada waxay noqon kartaa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu saaxiibo. Haddii kale, way adkaan doontaa inaad yeelato saaxiibo cusub markaad gabowdo.
Farsamooyin ku saabsan sida loo yeesho saaxiibo oo saameyn loogu yeesho dadka
Sidii aan soo sheegnayba, kolba waqtiga ka dambeeya, way adkaaneysaa inaad yeelato saaxiibo cusub. Sidaa darteed, waxaa jira tabo qaarkood oo lagu barto sida saaxiibo looga dhigo cagaha dadka. Aan aragno waxa farsamooyinkan aasaasiga ahi yihiin:
Samee waqti go'an bilowga sidaa darteed wuxuu ogyahay inuusan ku mashquulin wadahadal kula yeelanayo isaga oo ka dhigaya isaga inuu dareemo raaxo badan.
Muuji xiisaha dhabta ah adigoo u rogaya jirkaaga oo dhan xaggiisa. Si joogto ah u sheeg magaciisa oo hubi inuu yaqaana magacaaga sida ugu dhakhsaha badan.
Waxaan ku weydiisanayaa raallinimo yar (waxa loogu yeero Ben Franklin ee ah in barasaabka Pennsylvania uu amaan ka helay dadka siyaasada ka soo horjeeda).
Farsamooyinkan yar yar ayaa waxtar badan leh in la jeclaado wax badan, laakiin inta badan kuma filna inay abuuraan xiriir saaxiibtinimo oo dhab ah
5 talaabo oo lagu baranayo sida saaxiib loo yeesho loona saameeyo dadka
Cilmu-nafsiga bulshada wuxuu awooday inuu muujiyo in xiriirka saaxiibtinimo laga dhisay isku ekaansho iyo dhawaansho. Taasi waa, qof adiga kula mid ah oo aad waqti badan la qaadan karto. Aan aragno maxay yihiin 5-ta tillaabo ee lagu baranayo sida loo yeesho asxaabta loona saameyn ku yeesho dadka:
U dhowaanshaha qofka
U dhawaanshaha jirka waa lagama maarmaan in la xoojiyo saaxiibtinimada. Markasta oo aad qof xiriir la yeelatid, waxay sii fahmi doonaan dabeecaddaada oo way sii kalsoonaan doonaan. Tani waa sababta aan guud ahaan saaxiibo ula sameysanno deriskeenna ama dadka nala fadhiya. Wax kasta oo aad wadaagaan, u dhowaanshaha ayaa shaqeyn kara. Kani waa waxa loogu yeero "saamaynta soo-gaadhista" waana mid si ballaadhan loo darsay: si fudud haddii aad aragto qof guud ahaan waxay kaa dhigeysaa inaad iyaga aad u jeceshahay.
Sidaa darteed, meesha ugu wanaagsan ee saaxiibbo cusub lagu yeesho waa halka aad waqtigaaga intiisa badan ku qaadato. Haddii aad rabto inaad saaxiib la noqoto qof gaar ah, isku day inaad ag fariisato agtiisa shaqada, cuntada, ama xafladaha, oo noqo mid joogto ah sida ugu macquulsan.
Haddii aad bilowdid shukaansi qofkaan si isdaba joog ah, waa waqtigii aad muujin lahayd kalsooni. Dad badan ayaa sidaas aaminsan waa inaadan goor hore furin ama aadan tusin daciifnimo xagga xiriirka. Muhiimadu waa inaad umuuqato kalsooni iyo kalsooni si kuwa kale ay u aaminaan. Si kastaba ha noqotee, waa wax cagsi ah. Tabar-darradu waa xoog. Xitaa haddii aan la wadaagno khibradaha shaqsiyeed qof aan hadda la kulannay, waxaan la xiriiri karnaa saaxiibbadeena ugu fiican wax ka yar saacad.
Xiriirka ugu adag ee ka dhexeyn kara labada qof waa kalsooni. Markaad kashifto cabsi ama amni darro, waxaad siineysaa kalsooni. Mawduucyada qaarkood ee aad ku kalsoonaan karto waxay noqon karaan kuwa soo socda:
Maxaad ka baratay xiriir jacayl hore
Maxaad ku horumarin lahayd xiriirka qoyskaaga
Maxaa kaaga walwal badan waqtiga dhow
Sideed dareemeysaa waqtigan nolosha ah
Wax wadaag ah
Haddii aad wadaagto waxoogaa macluumaad shaqsiyeed ah oo ku saabsan naftaada, ama isla markaa, ujeeddadaadu waa inaad hesho waxyaalo isku mid ah, maxaa yeelay waxaan si fiican ugula xiriiri karnaa dadka aan u maleyno inay sidayada oo kale yihiin. Laakiin kiiskan, tirada ayaa ka wanaagsan tayada. Furaha ayaa ah inta iskumid ee aad kaheli karto, maahan waxyaabo qaas ah oo isku mid ah.. Markaad wali sifiican isu aqoonin, helitaanka wax wadaaga waxay umuuqan kartaa wax dhib badan, laakiin badanaa way fududahay, ilaa intaad xiisaynayso waxa qofkaasi ka hadlayo inbadan oo naftaada kahadlaya.
Mararka qaarkood waa wax u fudud sida fudud ee lagu weydiinayo waxaad ku qabato waqtigaaga firaaqada. Sidan oo kale, waxaad horey u haysataa 80% habka.
Tixraac wax aad wadaagaan laakiin qaab shaqsiyeed aad uga sii badan. Tusaale ahaan, hadaad ogaato inaad labadiinuba waaliddihiin gabar, halkii aad kaliya u dabaaldegi laheyd isku ekaantaas oo aad kahadlayaan sida ay uqurux badan tahay, weydii sida uu u nool yahay marxaladan noloshiisa.
Sida loo saaxiibo loona saameeyo dadka: ka bax xuubka
Ugu dambeyntiina, haddii aad tihiin laba qof oo shaqo wadaaga, waa inaad isku daydaa inaad heshid wax taas ka duwan. Sidan oo kale, waad ku raaxeysan kartaan midba midka kale. Ka bax shaqada Waa lagama maarmaan in la abuuro xiriiro cusub maaddaama waaya-aragnimadu ay isla noolyihiin.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran doontid wax badan oo ku saabsan sida loo yeesho saaxiibo iyo saameyn dadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Sida loo yeesho saaxiibo dadka saameynna loogu yeesho
Midabada timaha ugu fiican ragga